Ugbu a ị nwere ike ịzụta Casio Pro Trek WSD-F20, smartwatch na-apụ n'okporo ụzọ na Wear 2.0 | Gam akporosis
Smart ese e jikọtara site na mmalite na nlekota oru mmeghari ahu, ma na Casio Pro Trek ị ga-enwe obi abụọ banyere nke a, ebe ọ bụ na ma atụmatụ ya na atụmatụ ya echere maka ndị hụrụ egwuregwu ndị kachasị njọ.
N'adịghị ka ndị na-emepụta nche elekere ochie nke pụtara n'ahịa smartwatch nwere ụdị adịchaghị na quirky wearables, Casio kpebiri iwere ụzọ dị iche, ebe ngwaọrụ ọhụrụ ya bụ ịga n'ihu nke usoro nke pụtara ihe dị ka afọ 5 gara aga, na-ekwu naanị n'oge ahụ enweghi ọtụtụ okwu banyere ya smart ese.
Ọ bụ Casio Pro Trek ka ekwuputara na mbụ CES 2017. Emepụtaghị ọtụtụ nkọwa dị mkpa dịka ọnụahịa ịzụta ma ọ bụ ụbọchị nnweta n'oge ahụ, mana ugbu a, ọnwa 3 ka e mesịrị, akụrụngwa emesiri ere.
Na aha zuru oke Casio Pro mee njem WSD-F20, Smartwatch nke a pụrụ ịhụ na onyogho dị n’elu batara na mbụ 2.0 Weebụ Weebụ ọ ga-abụkwa na ọ ga-arụ ọrụ ebube nye ndị hụrụ ọrụ okike n'anya. Ọ dịghị onye ga - egbochi gị iburu ya gaa mgbatị ahụ, mana atụmatụ ya yiri ka ọ dabara adaba maka gburugburu okike, dịka oke ọhịa, ugwu, wdg.
Banyere nhazi ngwaike, Casio Pro Trek WSD-F20 ọhụrụ na-eweta MIL-STD-801G asambodo (mmiri na-adịghị omimi ruo mita 50 miri) na a obere oriri GPS mmetụta ike nke ga-edekọ n'enweghị nsogbu ụzọ gị niile gara njem na-ejighị smartphone.
Site Akwukwo ozi, Maapụ ụzọ gasị gị nwere ike ibudata tupu oge eruo iji ya site na nche site na njikọ ịntanetị. Ọzọkwa, n'ihi ọrụ a na-akpọ Ebe nchekwa ebe, WSD-F20 ga - enyere gị aka ịchekwaa ebe kachasị adọrọ mmasị ị hụrụ n'ụzọ. Nke a bara uru dịka ọmụmaatụ maka ndị na-ese foto na-enyocha ihe okike na ịchọ ebe ọhụụ tupu ị gaa foto ha.
Enwere ike ịzụta Casio Pro Trek WSD-F20 ọhụrụ site na emeputa website na ọnụahịa nke dollar 500, ọ bụ ezie na ọ ga-erukwa ụlọ ahịa pụrụ iche na mba anyị na izu ndị na-abịanụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » smartwatch » Nwere ike ịzụta Casio Pro Trek WSD-F20, smartwatch niile nke tọọ na Android Wear 2.0